Home News Dhalinyaro Soomaaliyeed oo lasoo taagay Maxkamad ku taal Bristol
Dhalinyaro Soomaaliyeed oo lasoo taagay Maxkamad ku taal Bristol
Maxkamada Bristol Crown Court ee magaalada Bristol ee dalka Britain ayaa dambi ku heshay afar eedeysanayaal oo labba kamid ah ay Soomaali yihiin, kadib markii kol sii horeysay ay eedeysanayaasha fuliyeen dagaal dhiig ku daatay oo dhexamaray iyaga iyo qolo kale Daroogada ka ganacsata.
Yoonis Dhibwaale iyo Koriye Xasan ayaa si gaar ah loogu eedeeyay in ay midi ku dhaawaceyeen Ayuub Diiriye iyo Axmed Jaamac oo ay dhex martay sida la sheegay muran ugu dambeyn kusoo gabagaboobay gacan ka hadal oo ay wiilashaan ku dhaawacmeyn.
Waxa kale oo dagaalkaasi ku geeriyooday Wiil kale oo Soomaali ah oo magaciisa lagu sheegay Yaasiain Axmed, balse eedeysanayaasha ayaa iska diiday in iyagu ay dileyn Yaasiin.
Maxmkamadeynta rgaan ayaa soo bilaabatay 20’ka bishii ina dhaaftay ee November, ilaamaa maxkamedeyntaan ugu dambeysay wax go’aan ah lagama gaarin, waxaana sabab u ahaa in wiilashaani aynan qiran dambiyada cadeynta loo hayo oo ay galeyn.
Xeer beegti ka kooban Lix Dumar ah iyo Lix Rag ah ayaa dhageystay dacwada iyo doodaha ragaan eedeysan, waxa ayna sheegeen in ay la tahay in eedeysanayaasha ay weli wakhti u baahanyihiin, waana sababta markale dib loogu hakiyey go’aan ka gaaristooda.
Previous articleXiisad u dhaxeeysa Al-shabaab iyo Dadka deegaanka oo Galgaduud ka taagan
Next articleTaliyaha Ciidamada Uganda oo xilka kala wareegay taliyahii hore
Dhowr Madaxweyne M/Goboleed oo la dajiyay Qorshahii Lagu Dili Lahaa VIDEO)
Gudigga Joogtada ah ee Baarlamaanka oo Maanta shiraya!!